Ihe omuma: WebSundew Web Scraping Software. Atụmatụ na usoro System dị na ile anya
Nchịkọta weebụ gụnyere ịnakọta data sitere na weebụsaịtị ma wepụ ya dị ka onye ọ bụla chọrọ. Mpaghara a na-emepe emepe mgbe nile, ọ bụkwa ya mere ụdị ọrụ software ndị ọhụrụ ji apụta. Nchịkọta weebụ aghọwo ụzọ kachasị dị irè ma dị mfe iji wepụ ozi bara uru site na ibe weebụ. WebSundew bụ ihe dị mgbagwoju anya ihe nchọgharị weebụ nke na-enye aka wepụ data na ọsọ ọsọ na arụpụta ihe. Na WebSundew, ịnwere ike ijide data buru ibu ma gbanwee ya dị ka usoro a chọrọ.
WebSundew - Kwesịrị ekwesị maka azụmahịa na ụlọ ọrụ:
WebSundew dị mma maka azụmahịa (ecommerce, ndị na-ere ahịa n'ahịa, ụlọ ọrụ ụlọ akụ, ngalaba IT) na ndị mmemme. Ị nwere ike ịchọta data achọtara ngwa ngwa, wewe ihe ubi ma debe ya na usoro JSON ma ọ bụ CSV. WebSundew na-abịa na nsụgharị dị iche iche dị iche iche: Lite, Ọkachamara, Ụlọ ọrụ, na Ụkpụrụ.
Ị nwere ike ịhọrọ nsụgharị dịka ihe ị chọrọ na atụmanya gị. Dịka ọmụmaatụ, mbipute Lite ahụ kwesịrị ekwesị maka mmalite na freelancers, na nsụgharị ọrụ dị mma maka nnukwu ụlọ ahịa. Nke kachasị mma bụ WebSundew ga-ebubata data dị mkpa na faịlụ Excel ma kpochapụ ma onyinyo ma akwụkwọ ederede.
WebSundew - Ọrụ na-arụ ọrụ ma dị ịtụnanya:
Ọ bụrụ na i jiri oke ọrụ arụ ọrụ ma mara otú ị ga-esi gụọ ego ahụ, ị ​​pụghị ime ihe ọbụla na-enweghị WebSundew. Ọ bụ ọrụ na-arụpụta nke ọma na nke maara nke ọma, nke bipụta ma weghaa data ahụ ma wepụ ya dị ka ihe niile ị chọrọ. Ị nwere ike iwepu ozi sitere na weebụsaịtị ndị dị omimi ma dị mfe, na-enweghị mmebi na mma.
Iji nyochaa ịdị irè ya, ị chọrọ ibudata ma wụnye WebSundew. Na nke a nchịkọta weebụ , ịnwere ike ịlele njirimara atọ, nkọwa meta, na okwu ọbụla nke saịtị na-egbukepụ anya.
WebSundew na-ejikwa ọdịnaya weebụ ọbụghị na ederede:
WebSundew bụ naanị ngwá ọrụ nwere ike ijikwa ọdịnaya weebụ n'enweghị ederede. Ngwá ọrụ a dị mma maka ndị na-abụghị ndị na-eme ihe nkiri na ndị na-abụghị ndị coders, ọ dịghịkwa gị mkpa ịmepụta ihe ọ bụla iji nweta ya. Kama, WebSundew na-eduzi gị site na template kere eke n'enweghị ihe ọ bụla eriri nke koodu na extracts HTML akwụkwọ ngwa ngwa. A na-echepụta nsonaazụ ya na CSV, XML na usoro mgbasa ozi. Ndị ọrụ dịka ngalaba ego na ụlọ akụ na ụma, ụlọ ọrụ ụlọ ahịa na ụlọ ahịa nwere ike irite uru site na ngwá ọrụ a .
Dị ka onye WebSundew ọrụ, ị ga-enwerịrị nke usoro ndị a:
1. Sistem arụmọrụ: Windows 7 / Vista / XP / 2000
3. Nhazi (CPU): Atọ 1000 MHz ma ọ bụ Pentium III
WebSundew interface interface-user interface:
WebSundew kacha mma mara maka ya enyi-enyi na interface na-enyere gị aka ibudata mma oyiyi gị usoro. Ọ nwere ike ịmepụta Web 2 n'ụzọ dị mfe. 0 weebụsaịtị ma wepu ozi sitere na isi mmalite HTML. Nbudata ya free version ma gbalịa WebSundew maka ụbọchị 15 iji jide n'aka na ya àgwà. Mgbe ngwụsị nke oge ikpe ahụ, ọ gaghị ekwe gị omume iji WebSundew, n'ihi ya, ị ga-azụ ya. Ị nwere ike ibelata 100 ibe weebụ yana mbipụta ikpe ya, mgbe ahụ ngwanro ahụ na-akwụsị arụ ọrụ na-achọ ka ị kwụọ ụgwọ ihe si $ 20 ruo $ 70. Na nkenke, WebSundew bụ ezigbo onye nchịkọta data na crawler weebụ Source .